भोलि कहाँ-कहाँ हुँदैछ उपनिर्वाचन ? – " सुलभ खबर "
भोलि कहाँ-कहाँ हुँदैछ उपनिर्वाचन ?
काठमाडौं : नेपालमा संघीयता अभ्यासमा आएपछि २०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन भयो। निर्वाचनयता विभिन्न कारण ३७ जिल्लामा ५२ रिक्त पद रिक्त छ। प्रतिनिधिसभातर्फ भने कास्की २ मात्रै खाली छ।
यिनै रिक्त तीनै तहमा शनिबार उपनिर्वाचन हुँदैछ। दलहरूले यो उपनिर्वाचनलाई मत सर्वेक्षणको रूपमा लिएका छन्। विशेष गरी अधिकांश स्थानमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीचमै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। उपनिर्वाचनलाई दलले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका छन्।
अघिल्लो पटक सुविधाजनक बहुमत पाएको सत्तारुढ नेकपा आफ्नो त्यो प्रभावलाई कायम राख्न चाहन्छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि पहिलोपटक उपनिर्वाचन हुँदैछ।
त्यसकारण पनि यो उपनिर्वाचन एकता प्रक्रिया जाँच्ने यन्त्रको रूपमा सत्तारुढले लिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने सरकारप्रति निरास भएका जनताको मत आफूतिर पार्ने अवसरका रूपमा लिएको छ।
त्यसैले त कांग्रेसले निर्वाचनअघि सरकारका असफलतालाई औल्याएको थियो। त्यस्तै मधेस केन्द्रित र अन्य साना दलले भने जनताले विकल्पका रूपमा अरू पार्टी रोज्छन् कि भन्ने मौका उपनिर्वाचनलाई बनाउँछन्।
३७ जिल्लामा कहाँ कहाँ हुँदैछ त उपनिर्वाचन ?
अहिले कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ मा सबैको ध्यान छ। प्रतिनिधिसभा तर्फको एउटा मात्र क्षेत्र भएकाले यसको चर्चा बढी छ। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तथा यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य रवीन्द्र अधिकारीको गत फागुनमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो। यस क्षेत्रलाई दलहरूले प्रतिष्ठाको रूपमा लिएका छन्।
यहाँ सत्तारुढ दलबाट अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराईको उम्मेदवारी छ। अधिकारीको उत्तराधिकारीका रूपमा रहेकी उनले रवीन्द्रको सपना पूरा गर्ने बताउँदै भोट मागेकी छन्।
कांग्रेसबाट खेमराज पौडेले उम्मेदवार बनेका छन्। पछिल्लो समय सरकारप्रति बढेको वितृष्णालाई कांग्रेसले यस क्षेत्रमा जितको आधार भएको दाबी गरेको छ। यस्तै भर्खरै उदाएका साझा र विवेकशील नेपाली दलले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। यहाँ सझाबाट रजनी केसी र विवेकशीलबाट जमुना शर्माले उम्मेदवारी दिएका छन्। यी दलले पुरानाबाट जनता निरास भएको र अब वैकल्पिक शक्तिको उदय हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रदेश-३ का प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण लामिछानेको निधनपछि भक्तपुर-१ (क)मा पनि निर्वाचन हुँदैछ। यहाँ पार्टीभित्रको विवादले सत्तारुढ दल नेकपालाई चुनौती छ। नेकपाबाट देवीप्रसाद ढकाल उम्मेदवार छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबाट भने कृष्ण भडेल प्रदेशसभाको उम्मेदवार छन्। आफ्नो गण भन्ने नेमकिपाले पनि यस क्षेत्रमा निरज लवजुलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। साना दल र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
दाङमा दुई पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। प्रदेशसभातर्फ क्षेत्र-३ (ख) र घोरही उपमहानगरपालिका-१६ को वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। प्रदेसभा सदस्य उत्तरकुमार ओली र वडाअध्यक्ष लछिनप्रसाद बुढामगरको निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। यसक्षेत्रमा प्रदेशसभातर्फ नेकपाले ओलीकै श्रीमती विमला ओलीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। यस्तै, कांग्रेसले केशव आचार्यलाई उम्मेदवार बनाएको छ। यहाँ यी दुई दलबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
बागलुङको निर्वाचन क्षेत्र २ (ख)मा सत्तारुढ दलले यसपटक राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समर्थन गर्दैछ। जनमोर्चाका उम्मेदवार खिमविक्रम शाहीलाई नेकपाको समर्थन छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट राजमोका टेकबहादुर घर्ती निर्वाचित भएका थिए। तर, बिरामीका कारण उनको निधन भएपछि सो क्षेत्रको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएको हो।कांग्रेसले त्यस क्षेत्रमा जितबहादुर शेरचन उम्मेदवार बनाएको छ। उनी अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार थिए।
यी स्थानीय तहमा हुँदैछ उपनिर्वाचन
स्थानीय तह अन्तर्गत एक उपमहानगरपालिका प्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि शनिबार उपनिर्वाचन हुँदैछ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख, पाँचथरको फाल्गुनन्द, संखुवासभाको मकालु, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका लागि मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुनेछ।
रिक्त ४३ वडाध्यक्षमध्ये महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका-६ का वडाध्यक्षको राजीनामा दिएका हुन्। जिससमा निर्वाचित भएका वडाध्यक्षमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका-७, लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका-२, बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका-२, प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिका-१ र २, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका-५ र कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिका-३ रहेका छन्।
आयोगका अनुसार यसअघिका वडाध्यक्षको विभिन्न कारणबाट निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको वडामा पाँचथरको फिदिम नगरपालिका-१ र हिलिहाङ गाउँपालिका-७, भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका-१, मोरङको धनपालथान गाउँपालिका-२, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-७, संखुवासभाको खाँदबारी नगरापालिका-३, खोटाङको साकेला गाउँपालिका-३, सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका-१२, महोत्तरीको बलवा नगरपालिका-२ र ८, सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका-१ र रौतहटको गढिमाई नगरपालिका-२ रहेको छ।
यस्तै बाराको बारागढी गाउँपालिका-१, पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका-५, रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका-५, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका-८, काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका-२, काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका-३, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१६ र खैरहनी नगरपालिका-४ र ५ मा पनि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को बौदीकाली गाउँपालिका-५, गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका-६, अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका-३, प्यूठानको प्यूठान नगरपालिका-२, रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका-१, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-१६, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका-६ मा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ।
यसैगरी बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका-१, अछामको मेल्लेख गाउँपालिका-५, डोटी आदर्श गाउँपालिका-२, बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका-४, सुर्नया गाउँपालिका-१ र दोगडाकेदार गाउँपालिका-४ तथा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका-१० का वडाध्यक्षको मृत्यु भएका कारण ती वडामा वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिवार्चन हुन लागेको छ।